စည်းကမ်းနှင့်သတ်မှတ်ချက်များ | GlobaliGaming.com Partner Program
သင်တို့ရှေ့မှာ မှတ်ပုံတင်နှင့်အတူရှေ့ဆက်, အောက်ကသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အခွအေနပြန်လည်သုံးသပ်ပါ.
အနာဂတ်ကိုးကားစရာများအတွက်ဖတ်ရန်နှင့် Print ကျေးဇူးပြု.
သင်တို့သည်ငါတို့၏ Affiliate အစီအစဉ်တွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်ဆန္ဒရှိခဲ့လျှင်, အောက်က "I Agree" ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်အဲဒီလိုလုပ်ဖို့သင့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ညွှန်ပြ. ထို့အပြင်, ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်အသုံးချဖို့ GlobaliGaming အပေါင်းအဖေါ်များ '' စျေးကွက် Tools များမဆိုသို့မဟုတ်မည်သည့်ဆုလာဘ်များလက်ခံခြင်းအားဖြင့်, ဘယ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကို web site ပေါ်တွင်အခြားသူကဒီသဘောတူညီချက်သို့မဟုတ်တွင်ပါရှိသောရှိမရှိဆုကြေးငွေသို့မဟုတ်ကော်မရှင်, သင်ဤသဘောတူညီချက်ထဲကသတ်မှတ်ထားအားလုံးစည်းကမ်းချက်များနှင့်အခွအေနမြေားအားဖြင့်ချည်နှောင်လျက်ခံရဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြယူဆနေကြပါတယ်. ရှင်းလင်းပြတ်သား၏ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်, စည်းကမ်းချက်များ "ငါတို့" နှင့် "ကျွန်တော်တို့ကို" GlobaliGaming အပေါင်းအဖေါ်များနှင့် "သင်" နှင့် "အဖွဲ့ဝင်" ကိုရည်ညွှန်းသောဤစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များများ၏လက်ခံမှုအားဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောစာချုပ်ရန်အခြားပါတီကိုရည်ညွှန်းသည်. အဆိုပါသက်တမ်း "ကုန်သည်" သူတို့ဆိုက်ကိုမြှင့်တင်ရန် GlobaliGaming အပေါင်းအဖေါ်များစာချုပ်ချုပ်ဆိုထားပြီးမည်သည့်ကုမ္ပဏီအဖြစ်သတ်မှတ်ပါတယ်(s ကို) နှင့် / သို့မဟုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ. အဆိုပါစာချုပ်တိုက်ရိုက်အသုံးပြုသူများ non-သီးသန့်မှန်အားဖြင့်သင်တို့ကိုထောက်ပံ့ပေး ("ဧည့်သည်များ") သင့်ရဲ့ site ကိုသို့မဟုတ်ဆိုဒ်များကနေကုန်သည်ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များမှ, ကော်မရှင်နှင့်လွှဲပြောင်းဆုကြေးငွေ၏ငွေပေးချေမှုများအတွက်ပြန်လာအတွက်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောသတ်မှတ်ထားသောအဖြစ်.
ဒီသဘောတူညီချက်ဖတ်, ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ web site ကိုမှတဆင့်ကျွန်တော်တို့ကိုတစ်ခုပြီးပြည့်စုံ GlobaliGaming အပေါင်းအဖေါ်များအဖွဲ့ဝင်အကောင့်လျှောက်လွှာတင်သွင်းကျေးဇူးပြုပြီးစာရင်းသွင်းရန်. ငါတို့သည်သင်တို့၏လျှောက်လွှာကိုလက်ခံခဲ့ခြင်းရှိမရှိသင့်လျှောက်လွှာအကဲဖြတ်ရန်နှင့်သင်အကြောင်းကြားပါလိမ့်မယ်. ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်လျှင်သင့်လျှောက်လွှာကိုငြင်းပယ်ခံရလိမျ့မညျ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ်ခုတည်းသောသမ္မာသတိရှိ, သင့်ရဲ့ site ကိုမည်သည့်အကြောင်းပြချက်များအတွက်မသင့်တော်ကြောင်း, ရန်ကန့်သတ်ထားအပါအဝင်သော်လည်းမ, ဆောက်လုပ်ဆဲဖြစ်ကြောင်းဆိုဒ်များ, ကလေးများမှာရည်ရွယ်, လိင်ကအကဲဆတ်သောပစ္စည်းများမြှင့်တင်ရန်, အကြမ်းဖက်မှုများမြှင့်တင်ရန်, မျိုးနွယ်အပေါ်အခြေခံပြီးခွဲခြားဆက်ဆံမှုမြှင့်တင်ရန်, လိင်, ဘာသာ, အမျိုးသား, မသန်စွမ်းမှု, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်, သို့မဟုတ်အသက်အရွယ်, တရားမဝင်လှုပ်ရှားမှုများမြှင့်တင်ရန်, သို့မဟုတ်ပညာတတ်ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးများကိုချိုးဖောက်.
ဒီအစီအစဉ်၏သက်တမ်းကာလအတွင်း (သင်သည်သင်၏လက်ခံမှုညွှန်ပြသည့်အခါအထက်သတ်မှတ်ထားတဲ့ထုံးစံ၌စတင်တံ့သော, သင်သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့တစ်ခုခုကအခြားအကြောင်းကြားသောအခါအဆုံးသတ်ရကြလိမ့်မည်, အီးမေးလ်ဖြင့်, ဒီသဘောတူညီချက်များ၏ရပ်စဲ၏), သင်သည်သင်၏ site ပေါ်တွင် GlobaliGaming အပေါင်းအဖေါ်များအားဖြင့်ပေးအပ်တဲ့နဖူးစည်းစာတမ်းသို့မဟုတ်နဖူးစည်းစာတမ်းတွေပြသကြမည် ("အအဖွဲ့ဝင် site ကို") ထိုကုန်သည်ရဲ့ဆိုဒ်များရန်အဖွဲ့ဝင်ဆိုက်ကိုမှလာရောက်လည်ပတ်သူများကိုညွှန်ကြားရန်ဟိုက်ပါလင့်ခ်အဖြစ်, ဆက်သွယ်ဘို့သီးသန့်အပေါင်းအဖေါ်များ GlobaliGaming အားဖြင့်ထောက်ပံ့ကွဲပြား URL များကို အသုံးပြု. ("အ supply Banner").
အဆိုပါကုန်သည်ရဲ့နဖူးစည်းစာတမ်းတွေနှင့် / သို့မဟုတ်စာသားလင့်များအဖွဲ့ဝင် site ပေါ်တွင်ပြသခံရကြလိမ့်မည်. အဖွဲ့ဝင်များလည်းထိုင်ထိုကုန်သည်မှတ်ဖော်ပြရန်သတင်းအချက်အလက်ပေးနိုင်ပါသည်(s ကို) သူ့ရဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာ(s ကို). အဖွဲ့ဝင် site ပေါ်တွင်အကြောင်းအရာတိသို့မဟုတ်ခေတ်မမီတော့ဖြစ်ဖို့ကိုတွေ့လျှင်, ထို့နောက်ငါတို့သည်သင်တို့၏ဆိုက်ကိုမဆိုအပြောင်းအလဲများကိုသင်အကြောင်းကြားစေခြင်းငှါ(s ကို) ကျွန်တော်တို့လုပ်သင့်တယ်လို့ခံစားရကြောင်း. ဒီသဘောတူညီချက်၌သတ်မှတ်ထားသည့်ဆက်ဆံရေးကိုနှစ်ဖက်စလုံးအဘို့ကို non-သီးသန့်ဖြစ်ပါသည်; ထိုကွောငျ့, ထိုအဖွဲ့ဝင်များ၏နဖူးစည်းစာတမ်းတွေပြသခွင့်ရကြလိမ့်မည်, နှင့်လင့်များမှပေး, ထိုအဖွဲ့ဝင်ဆိုက်မှတဆင့်အခြားကုမ္ပဏီတွေရဲ့ဆိုဒ်များ, နှင့် GlobaliGaming အပေါင်းအဖေါ်များအဖွဲ့ဝင်ဆိုက်ထက်အွန်လိုင်းနှင့်အခြားဝန်ဆောင်မှုများမှတဆင့်ကုန်သည်ရဲ့နဖူးစည်းစာတမ်းတွေရရှိနိုင်စေရန်ခွင့်ရှိသည်ဖြစ်ရလိမ့်မည်.
Banner ၏ Delivery နှင့် display, မိတ္တူ, နှင့်ပရိုမိုးရှင်းများ Material
တစ်ဦးအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်, သငျသညျဂရပ်ဖစ်နှင့်စာသားလင့်များအမျိုးမျိုးမှ GlobaliGaming အပေါင်းအဖေါ်များ '' ဆိုက်ကတဆင့် access ကိုရလိမ့်မည် (ဤဆက်စပ်အသီးအသီးတစ်ခါတစ်ရံ "Links များ" အဖြစ်ဤနေရာတွင်ရည်ညွှန်းခံရသို့မဟုတ်, တစ်ဦးချင်းစီ, တစ်ဦး "Link ကို" အဖြစ်။) ထိုအဖွဲ့ဝင်ရန်အပေါင်းအဖေါ်များနှင့်ကုန်သည်ဤဥပဒေဖြင့်ထောက်ပံ့ငွေ GlobaliGaming non-သီးသန့်, Non-လွှဲပြောင်း, Non-assign (အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောထောက်ပံ့ပေးအဖြစ် မှလွဲ.) အခွင့်အရေး, ဒီသဘောတူညီချက်များ၏သက်တမ်းကာလအတွင်း, အသုံးပြုရန် (သောကော်ပီကူးဖို့လက်ျာပါဝင်ကြမည်, ပို့ပေး, ဖြန့်ဝေ, ပုဂ္ဂလိကပိုင်နှင့်လူသိရှင်ကြားနှစ်ဦးစလုံး display နှင့်လုပ်ဆောင်): အပေါင်းအဖေါ်များ '' နှင့်ကုန်သည်ရဲ့နဖူးစည်းစာတမ်းတွေ GlobaliGaming, နာမတျောကို, site ကိုနာမတျောကို, နှင့်အခြားဆက်စပ်စာသားနှင့်ဂရပ်ဖစ်ပစ္စည်းကိုအချိန် GlobaliGaming အပေါင်းအဖေါ်များနှင့် / သို့မဟုတ်အချိန်ကနေအဖွဲ့ဝင်ရဲ့ site ပေါ်တွင်ပါဝင်၏ express ကိုရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အဖွဲ့ဝင်ရန်ကုန်သည်များကရရှိနိုင်ပါလုပ်နေကြတယ် (စုပေါင်းလျက်, "အကုန်သည်ရဲ့ပစ္စည်း") နှင့်အထက်ခွင့်ပြုချက်တိကျတဲ့ရည်ရွယ်ချက်. GlobaliGaming အပေါင်းအဖေါ်များနှင့်ကုန်သည်သူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာမြှင့်တင်ရေးပစ္စည်းကို advertise နှင့်မြှင့်တင်ရန်မှအဖွဲ့ဝင်ခွင့်. ပရိုမိုးရှင်း၏ copywriting အဖွဲ့ဝင်များကပြုပြင်မွမ်းမံမဟုတ်သလိုအတုမရစေခြင်းငှါ. မိတ်ဖက်များနှင့်ကုန်သည် GlobaliGaming လည်းကိုရည်ညွှန်းဖို့အဖွဲ့ဝင်ခွင့်, ထိုအဖွဲ့ဝင်ရဲ့ကြော်ငြာနှင့်ပရိုမိုးရှင်းအတွက်, အ GlobaliGaming အပေါင်းအဖေါ်များနှင့်ကုန်သည်ရဲ့ဆိုဒ်များသည့်အဖွဲ့ဝင်ဆိုက်ကတဆင့်လက်လှမ်းမီသောအချက်ကိုမှ, မည်သည့်ထိုကဲ့သို့ကြေညာချက်ကထောက်ပံ့:
(တစ်ဦး) မည်သည့်အမှတ်တံဆိပ်မပါဝင်ပါဘူး, ဝန်ဆောင်မှုအမှတ်အသားများ, ဒီဇိုင်းအမှတ်အသားများ, သင်္ကေတများနှင့် / သို့မဟုတ် GlobaliGaming အပေါင်းအဖေါ်များ၏ဇာစ်မြစ်၏အခြား indicia ဒါမှမဟုတ် GlobaliGaming အပေါင်းအဖေါ်များထက်အခြားကုန်သည်ဒါမှမဟုတ်ကုန်သည်ရဲ့ဆိုက်ကို(s ကို) non-ထူးခြားတဲ့ typeface အတွက်အမည်နှင့် / သို့မဟုတ်ဆိုက်အမည်များ (အထူးသဖြင့်, ထိုလိုဂို GlobaliGaming အပေါင်းအဖေါ်များမဆို၏ဒီဇိုင်းကို 'သို့မဟုတ်ထိုကုန်သည်ရဲ့အမှတ်အသားမှာအသုံးပြုမ typeface);
(ခ) ဖော်ပြမထားဘူး, အကြံပြု, သို့မဟုတ်ဆိုလို, ထိုကဲ့သို့သောထုတ်ပြန်ချက်၏အသုံးအနှုန်းသို့မဟုတ်ထင်ပေါ်ကျော်ကြားခြင်းဖြင့်သို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်, ထိုကုန်သည်စပွန်ဆာကြောင်း, အာဏာပိုင်များ, နှင့် / သို့မဟုတ်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးရဲ့ site ၏ source သို့မဟုတ်မူလအစဖြစ်ပါတယ်; နှင့်
(c ကို) GlobaliGaming အပေါင်းအဖေါ်များဒါမှမဟုတ်ကုန်သည်ကဲ့ရဲ့ရှုမပါဘူး, ၎င်း၏ထုတ်ကုန်, န်ဆောင်မှု, သို့မဟုတ်အဖွဲ့ဝင်. အ GlobaliGaming အပေါင်းအဖေါ်များသို့မဟုတ်ကုန်သည်ရဲ့ပစ္စည်းများအားလုံးသည်အသုံး hereunder အကုန်သည်များ၏အကျိုးအတွက်မှ inure ရကြလိမ့်မည်နှင့်မည်သည့်လူ့အခွင့်အရေးဖန်တီးရမည်မဟုတ်, ထိုအဖွဲ့ဝင်အဘို့ထိုသူတို့အတွက်ခေါင်းစဉ်သို့မဟုတ်အကျိုးစီးပွား. အ GlobaliGaming အပေါင်းအဖေါ်များသို့မဟုတ်ကုန်သည်ရဲ့အမည်များကိုအဘယ်သူမျှမကအခြားအသုံးပြုမှု, အမှတ်တံဆိပ်, ဝန်ဆောင်မှုအမှတ်အသားများ, ဒီဇိုင်းအမှတ်အသားများ, သင်္ကေတများနှင့် / သို့မဟုတ်မူလအစဒါမှမဟုတ်အထက်ပါမဆိုဖို့ confusingly အလားတူအခြားပုံစံ၏အခြား indicia GlobaliGaming အပေါင်းအဖေါ်များ၏ကြိုတင်ရေးထားလျက်ရှိ၏ခွင့်ပြုချက်ဒါမှမဟုတ်ကုန်သည်မပါဘဲမည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အဖွဲ့ဝင်များကလုပ်စေခြင်းငှါ. ထိုကုန်သည်နှင့်အဖွဲ့ဝင်တို့အကြားအဖြစ်, ထိုကုန်သည်ကိုပိုင်ဆိုင်, နှင့်သီးသန့်ပိုင်ဆိုင်ဆက်လက်ရကြလိမ့်မည်, အားလုံးမှန်ခေါင်းစဉ်နဲ့အကျိုးစီးပွား (ကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲအပါအဝင်, မူပိုင်ခွင့်နှင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ၏ဥပဒေအရပေးအပ်အားလုံးအခွင့်အရေးများ) ထိုကုန်သည်ရဲ့ပစ္စည်းများအပေါင်းတို့နှင့်အမည်များနှင့်ရန်, အမှတ်တံဆိပ်, ဝန်ဆောင်မှုအမှတ်အသားများ, ဒီဇိုင်းအမှတ်အသားများ, ထိုမြို့၌ရှိသောကမ္ဘာအနှံ့နှင့်တစ်သက်လုံးသင်္ကေတများနှင့် / သို့မဟုတ်ဇာစ်မြစ်၏အခြား indicia, ဒီသဘောတူညီချက်ထဲမှာခွင့်ပြုတဲ့ခွင့်ပြုချက်တွေကိုမှဘာသာရပ်.
THE Links များထိန်းသိမ်းခြင်း
သငျသညျအပြည့်အဝသင့်ရဲ့ဆိုက်ကိုနှင့် GlobaliGaming အပေါင်းအဖေါ်များဆိုက်ဒါမှမဟုတ်ကုန်သည်ရဲ့ဆိုက်ကိုအကြား Links များတည်ထောင်ထိန်းသိမ်းနည်းနိုင်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်သဘောတူ(s ကို). သင့်ဆိုက်ကိုများ၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများနှင့်မွမ်းမံသင်၏တာဝန်ဖြစ်လိမ့်မည်. အဆိုပါဂရပ်ဖစ်နှင့် / သို့မဟုတ် GlobaliGaming အပေါင်းအဖေါ်များဆိုက်ဒါမှမဟုတ်ကုန်သည်ရဲ့ဆိုဒ်များဖို့ Links များနှင့်ဆက်စပ်စာသားကိုအခါအားလျော်စွာ updated မည်ဖြစ်ပြီးသင်တစ်ဦးပုံမှန်အစည်းအဝေးအခြေခံပေါ်မှာအညီသင့်ဆိုက်ကိုများ၏ content update လုပ်ဖို့ကြောင့်လိုအပ်သောဖြစ်လိမ့်မည်. အကြှနျုပျတို့သညျဤသဘောတူညီခ၏စည်းကမ်းချက်များနှင့်အခွအေနမြေားကိုအောက်ပါလျှင်ဆုံးဖြတ်ရန်မည်သည့်အချိန်တွင်မသင့်ဆိုက်ကိုစောင့်ကြည့်ဖို့နဲ့ကျွန်တော်ခံစားမိကြောင်းသင့်ဆိုက်ကိုမဆိုအပြောင်းအလဲများကိုသင်အကြောင်းကြားရန်အခွင့်အရေးမဖြစ်စေကြပြီသတိပြုမိဖြစ်ကျေးဇူးပြုပြီး. သင်ကဦးတည်ရာကို URL ကိုသတင်းအချက်အလက် mask သို့မဟုတ် GlobaliGaming အပေါင်းအဖေါ်များဒါမှမဟုတ်ကုန်သည်ဆိုက် URL များကို mask သို့မဟုတ်ဝှက်ခြင်းအလိုငှါအခြားမည်သည့်နည်းလမ်းကိုသုံးစွဲဖို့ခွင့်ပြုမထားပေ
သငျသညျအပေါင်းအဖေါ်များ GlobaliGaming အားဖြင့်ပယ်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ရသေးကြောင်း SMS ကိုစျေးကွက်များအတွက်သင့်ကိုယ်ပိုင်မိတ္တူမြှင့်တင်ရန်ခွင့်ပြုမထားပေ. သငျသညျသင်၏စာသားမက်ဆေ့ခ်ျများနှင့်တကွအကျိုးဆက်များရဲ့ contents တာဝန်ရှိသည်. သငျသညျကြိုတင် GlobaliGaming အပေါင်းအဖေါ်များရေးထားလျက်ရှိ၏ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲမည်သည့်စာသားမက်ဆေ့ခ်ျပေးပို့ဖို့မိုဘိုင်း SMS ကိုစျေးကွက်မသုံးစွဲဖို့သဘောတူ. သငျသညျဥပဒေမဲ့ဖြစ်ကြောင်းဖောက်သည်ဘေးဖယ်-In သို့မဟုတ်ပစ္စည်းကိုအခြေစိုက်ကြသည်မဟုတ်သည့်စာသားမက်ဆေ့ခ်ျပေးပို့ဖို့မိုဘိုင်း SMS ကိုစျေးကွက်မသုံးစွဲဖို့သဘောတူ, နှောင့်ယှက်, အသရေဖျက်, မသငျ့မလျြောသော, ခြိမ်းခြောက်, အန္တရာယ်ရှိသော, ရိုင်းသော, ညစ်ညမ်းသောသို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်တစ်ရာဇဝတ်ပြစ်မှုတစ်ရပ်ကိုဖွဲ့စည်းစေခြင်းငှါ, လူထုအခြေပြုတာဝန်ယူမှုသို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်မဆိုမျိုးတားမြစ်ခံရပစ္စည်းသို့မဟုတ်သဘာဝအားမြင့်တက်ပေးသို့မဟုတ်တစ်ရာဇဝတ်ပြစ်မှုတစ်ရပ်ကိုဖွဲ့စည်းနိုင်ကြောင်းအကငျြ့အားပေး, လူထုအခြေပြုတာဝန်ယူမှုမှမြင့်တက်ပေးသို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်မဆိုသက်ဆိုင်ဒေသခံချိုးဖောက်, ပြည်နယ်, အမျိုးသားရေးသို့မဟုတ်နိုင်ငံတကာဥပဒေ, စည်းမျဉ်းသို့မဟုတ်စည်းကမ်းတရားရုံးအမိန့်. အပေါင်းအဖေါ်များ GlobaliGaming GlobaliGaming အပေါင်းအဖေါ်များသတိထားဖြစ်လာလျှင်ကြိုတင်အသိပေးမရှိဘဲသင်၏ account ကိုရပ်ဆိုင်းခွင့်ရှိသည်နှင့်ဆုံးဖြတ်သည်, သူ့ရဲ့တစ်ဦးတည်းသောသမ္မာသတိရှိ, သင်အထက်ပါလမ်းညွှန်ချက်များမဆိုချိုးဖောက်ဖြစ်ကြောင်း.
GlobaliGaming အပေါင်းအဖေါ်များတက်လက်မှတ်ထိုးခြင်းအားဖြင့်သင် GlobaliGaming အပေါင်းအဖေါ်များနှင့်၎င်း၏မိတ်ဖက်ထံမှပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကိုလက်ခံရရှိရန်သဘောတူ. သငျသညျအပေါင်းအဖေါ်များ GlobaliGaming ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်သွယ်ရေးထဲကရွေးချယ်ဖို့ရှေးခယျြနှင့်၎င်း၏ကုန်သည်များဆက်သွယ်ရေးထဲကဖာထေးအဖွဲ့ဝင်များမှပေါ်ပေါက်စေခြင်းငှါမဆိုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက်တာဝန်ရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ အကယ်.
သငျသညျသိလျက်က GlobaliGaming အပေါင်းအဖေါ်များဒါမှမဟုတ်ကုန်သည်ထိခိုက်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ဖြစ်စေမလက်ခံသည်အင်တာနက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလေ့အကျင့်ကိုအသုံးပြုပြီးထုတ်လုပ်မလူသိများသို့မဟုတ်သံသယရှိသူအသွားအလာမှအကြိုးခံစားမည်မဟုတ်. သင့်လိမ်လည်မှုလှုပ်ရှားမှု, သိလျက်သို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်, သင့်ရဲ့ link ကိုမှတဆင့်ကုန်သည်ရဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုသွားဖို့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးမှပျေါပေါကျ, ကျနော်တို့သည့်အချိန်တွင်မဆိုသင့်အားပေးချေအကော်မရှင်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးရန်ခွင့်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်. ဤကိစ်စတှငျကြှနျုပျတို့၏ဆုံးဖြတ်ချက်နောက်ဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်နှင့်မျှမတို့စာပေးစာယူသို့ဝငျပါလိမ့်မည်. အဲဒီလို traffic ကိုသင်၏ဥာဏ်နှင့်အတူဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ကြောင်းယုံကြည်ဖို့ကျိုးကြောင်းဆီလျော်အကြောင်းရင်းရှိပါကဤသဘောတူညီအောက်၌သင့်မှုကြောင့်အားလုံးပမာဏကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်ခွင့်ကျနော်တို့ချန်ထားသော
အောက်ပါအလွှာ (တစ်လလျှင်) လျှောက်ထားလိမ့်မည်:
£ 5,000.00 အထိ, ဝင်ငွေ 30% အခွန်ဝန်ကြီးဌာန
£ 5,000.01 အကြား -> £ 15,000.00, ဝင်ငွေ 35% အခွန်ဝန်ကြီးဌာန
£ 15,000.01 + အကြား, ဝင်ငွေ 40% အခွန်ဝန်ကြီးဌာန
အထက်ပါကော်မရှင်အဖွဲ့များကကုန်သည်များ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်ပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်များမှာ. မည်သည့်ပြောင်းလဲမှု၏အမှု၌, တစ်ဦးကြိုတင်အသိပေးစာကိုအသင်းဝင်များအားပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း (affiliates).
အဆိုပါ Net ကဂိမ်းအခွန်အဖြစ်ကိုအောက်တွင်တွက်ချက်သည်: Net ကဂိမ်းအခွန်ဝန်ကြီးဌာန: ငွေအလောင်းအစား - ငွေသားအနိုင်ရခဲ့ - ထီပေါက်ပံ့ပိုးမှုများ - ဆုကြေးငွေ - အပြောင်းအလဲနဲ့အခကြေးငွေ - ဆိုအိုင်ယာလန်သမ္မတဟောင်း Mary Robinson - ID ကိုစစ်ဆေးနေအခကြေးငွေ - admin ရဲ့ကုန်ကျစရိတ် - operating ကုန်ကျစရိတ်
အပေါင်းအဖေါ်များ GlobaliGaming ကော်မရှင်အဘို့သင့်ငွေပေးချေမှုကို process မပါဘူး. Mediacle ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်စားပေါ်မှာဤစီမံခန့်ခွဲ.
ကော်မရှင်ငွေပေးချေမှုကိုယခင်တစ်လရဲ့ကော်မရှင်ဖွဲ့ရန်လစဉ်လတိုင်း၏ 25 ဖွငျ့ထားကြပါတယ်. ကြောင်းကော်မရှင်ငွေပေးချေမှုကိုသငျသညျကရွေးချယ်ပေးချေမှု၏နည်းလမ်း၏ မူတည်. နိမ့်ဆုံးငွေပေးချေမှုတံခါးခုံကိုမှဘာသာရပ်များမှာ ကျေးဇူးပြု. သတိပြုပါ. ကော်မရှင်ငွေပေးချေမှုများအတွက်နိမ့်ဆုံးတံခါးခုံအဖြစ်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောများမှာ:
BACS (ဗြိတိန်နိုင်ငံထိုနေ့ဘဏ်မှလွှဲပြောင်း): £ 100 က
အီလက်ထရောနစ်လွှဲပြောင်း: £ 500
အရေးကြုံလျှင်, ထိုအဖွဲ့ဝင် (Affiliate) မဆိုအထူးသဖြင့်တစ်လအတွက်အဖွဲ့ဝင်ကရွေးချယ်ပေးချေမှု၏နည်းလမ်းအားဖြင့်လိုအပ်သည့်အတိုင်းနိမ့်ဆုံးခုံရောက်ရှိမပါဘူး, အနိမ့်ဆုံးခုံရောက်ရှိသည်အထိကော်မရှင်၏ငွေပမာဏအဲဒီနောက်အောက်ပါလကူးလှိမ့်ပါလိမ့်မည်.
ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်, သငျသညျအပေါင်းအဖေါ်များ GlobaliGaming နှင့်ကောင်းသောရပ်တည်မှုအတွက်တက်ကြွစွာအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရပါမည်. မည်သည့်ဆုလာဘ်အစီအစဉ်တွင်ပါဝင်အဖွဲ့ဝင်များ GlobaliGaming အပေါင်းအဖေါ်များ၏ဆုံးဖြတ်ချက်များအားဖြင့်ချည်နှောင်လျက်ခံရဖို့သဘောတူ, အရာအပေါင်းတို့ကိုအရိုအသေအတွက်နောက်ဆုံးနဲ့နှောင်ဖြစ်လိမ့်မည်. အပေါင်းအဖေါ်များ GlobaliGaming အားဖြင့်စည်းကမ်းများနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်များအားလုံးသည်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူနောက်ဆုံးများမှာ. အပေါင်းအဖေါ်များ GlobaliGaming ဆိုနှင့်အဖွဲ့ဝင်ဆိုအကြောင်းပြချက်များအတွက်အစီအစဉ်များကိုချီးအားလုံးရပ်ဆိုင်းရန်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်, အပါအဝင်, ဒါပေမယ့်ကန့်သတ်မ, ထိုဆုလာဘ်အစီအစဉ်အုပ်ချုပ်ရေးစီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းပြေး၏သို့မဟုတ်လျှင်နိုင်စွမ်းသည်မဟုတ်မည်သည့်အကြောင်းပြချက်ဆိုပါက, လုံခွုံရေး, တရားမျှတမှု, သမာဓိ, ဒါမှမဟုတ်ဆုလာဘ်အစီအစဉ်၏သငျ့လျြောသောအကငျြ့ယိုယွင်းသို့မဟုတ်ဆိုးရွားစွာထိခိုက်သည်, ကွန်ပျူတာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးအားဖြင့်ရောဂါကူးစက်မှုကြောင့်အပါအဝင်, bug တွေ, လက်ကမြင်း, ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု, လိမ်ညာမှု, နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအောင်မြင်မှုများ, GlobaliGaming အပေါင်းအဖေါ်များ '' ထိန်းချုပ်မှုထက်ကျော်လွန်သို့မဟုတ်အခြားမည်သည့်အကြောင်းတရားများ. အပေါင်းအဖေါ်များ GlobaliGaming ဖျက်သိမ်းပိုင်ခွင့်ရှိသည်, အဆုံးသတ်, ကြိုတင်အသိပေးခြင်းမရှိဘဲနှင့်အဖွဲ့ဝင်ဖို့တာဝန်ယူမှုမရှိဘဲဆုကြေးအစီအစဉ်ပြုပြင်မွမ်းမံသို့မဟုတ်ရုပ်သိမ်းပေးရန်.
အားလုံးအခွန်, အဖိုးအခ, နှင့်ဝန်ပို, ရှိလျှင်, ဆုလာဘ်များပေါ်တွင်ဆု-ဆုရှင်၏တစ်ဦးတည်းသောတာဝန်ရှိပါတယ်. တစ်ဆုချီးမြှင့်၏လက်ခံမှု GlobaliGaming အပေါင်းအဖေါ်များနှင့်လက်ခံရရှိသူရဲ့နာမညျကိုအသုံးပွုဖို့က၎င်း၏ကြော်ငြာနှင့်မြှင့်တင်ရေးအေဂျင်စီများအဘို့အခွင့်ပြုချက်ဖွဲ့စည်း, ဓာတ်ပုံနှင့် / သို့မဟုတ်ကြော်ငြာနှင့်လျော်ကြေးမပါဘဲမည်သည့်အလယ်အလတ်အတွက် GlobaliGaming အပေါင်းအဖေါ်များ၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်လူထုသိအောင်အဘို့ပုံသဏ်ဍာနျမဟုတ်ရင်ပညတ်တရားအားဖြင့်တားမြစ်သည်မဟုတ်လျှင်.
အဖွဲ့ဝင်များအန္တရာယ်ကင်း GlobaliGaming အပေါင်းအဖေါ်များနှင့်၎င်းတို့၏ကုန်သည်များနှင့်၎င်းတို့၏သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့ဝင်များလွှတ်ပေးရန်နှင့်ကိုင်, ခွဲများ, ဒါရိုက်တာများ, အရာရှိ, အေးဂျင့်များ, န်ထမ်း, ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်သေဒဏ်စီရင်လေးစားမှုနှင့်အတူမည်သည့်အပေါင်းတို့နှင့်တာဝန်ယူမှုအနေဖြင့်ဆုကြေးအစီအစဉ်၏ဆုကြေးအစီအစဉ်ကနေဖြစ်ပေါ်လာမဆိုလမ်းဖို့ဒါမှမဟုတ်နှင့်ဆုနဲ့ဆက်စပ်အပေါင်းတို့နှင့်အခြားသူများကို, ကိုသုံးခြင်းသို့မဟုတ်ဆု၏အလွဲသုံးစားလုပ်, မည်သည့်ဒဏ်ရာသို့မဟုတ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအဖွဲ့ဝင်ရဲ့သို့မဟုတ်အခြားလူတစ်ဦး၏ကွန်ပျူတာအပါအဝင်အိမ်ခြံမြေမှပုဂ္ဂိုလ်ရေးဒဏ်ရာသို့မဟုတ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက်တာဝန်ယူမှုအပါအဝင်.
ဤနေရာတွင်အသုံးပြုအဖြစ်, "လျှို့ဝှက်သတင်းအချက်အလက်" အားလုံးပါးစပ်သို့မဟုတ်စာဖြင့်ရေးသားသတင်းအချက်အလက်ဆိုလိုရကြလိမ့်မည်, သမျှကိုမျိုးသမျှ form မှာ, အတိတ်နှင့်စပ်လျဉ်း, ပစ္စုပ္ပန်သို့မဟုတ်အနာဂတ်ထုတ်ကုန်, ဆော့ဖျဝဲ, သုတေသနလုပ်ငန်း, တိုးတက်ရေး, တီထွင်မှု, လုပ်ငန်းစဉ်များ, နည်းစနစ်, ဒီဇိုင်းများသို့မဟုတ်အခြားနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်နှင့်ဒေတာများ, နှင့်စျေးကွက်အစီအစဉ်များ (ပါတီ hereto အဖြစ်လျှို့ဝှက်ကျင်းပရန်တာဝန်ရှိသည်ကြောင်းတတိယပါတီများ၏ထိုကဲ့သို့သောသတင်းအချက်အလက်များအပါအဝင်), ထိုကဲ့သို့သောသတင်းအချက်အလက်များဖြစ်နိုင်သလိုအဖြစ်ဖော်ထုတ်ခဲ့သို့မဟုတ်ဖြစ်နိုင်သလိုစီးပွားဖြစ်သို့မဟုတ်လျှို့ဝှက်ဖြစ်စဉ်းစားနိုင်ကြောင်းထောက်ပံ့, ပါတီတစ်ခုခုက:
(တစ်ဦး) ကြိုတင်ဒီသဘောတူညီချက်၏ယနေ့အထိလက်ခံရရှိကြပေမည်, တိုက်ရိုက်အခြားထံမှသို့မဟုတ်သွယ်ဝိုက်ဖြစ်စေတတိယပါတီများကနေ; သို့မဟုတ်
(ခ) အခြားတစ်ကနေ hereunder ခံခြင်းငှါ. တစ်ခုချင်းစီကိုပါတီကသဘောတူ, သည်အခြားပါတီများ၏လျှို့ဝှက်ပြန်ကြားရေးက၎င်း၏လက်ခံရရှိရန်ရိုသေလေးစားမှုနှင့်အတူ, ကရကြမည်:
(ကိုယ့်) အဲဒါကိုထုတ်ဖော်ရန်အလိုရှိသောတော်မမူကြောင်း၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အလားတူလျှို့ဝှက်သတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူကိုအသုံးပြုသည်ကဲ့သို့သောလျှို့ဝှက်ပြန်ကြားရေးထုတ်ဖော်ကာကွယ်တားဆီးဖို့အတူတူစောင့်ရှောက်မှုနှင့်သမ္မာသတိကိုသုံး, ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမအဖြစ်အပျက်အတွက်စောင့်ရှောက်မှု၏တစ်ဦးကျိုးကြောင်းဆီလျော်ဒီဂရီထက်လျော့နည်းနှင့်အတူ;
(ii) ထိုကဲ့သို့သောလျှို့ဝှက်သတင်းအချက်အလက်ကိုလက်ခံဖို့ကိုသာရည်ရွယ်ချက်ခွင့်ပြု hereunder များအတွက်ထိုကဲ့သို့သောလျှို့ဝှက်သတင်းအချက်အလက်ကိုသုံး; နှင့်
(တစ်ဦး) ဒါမှမဟုတ်နောကျမှမရှိအမှားများလုပ်ရပ်ကတဆင့်အများပြည်သူဒိုမိန်းရဲ့အစိတ်အပိုင်းဖြစ်လာ, ချွတ်ယွင်းချက်, သို့မဟုတ်ပေါ့ဆမှုလက်ခံသူ၏အစိတ်အပိုင်းအပေါ်;
(c ကို) ကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲနှင့်ဤသဘောတူညီချက်၏ပြိုပျက်ရာမပါဘဲတတိယပါတီထံမှလက်ခံရရှိ;
(ဃ) ၎င်း၏မှတ်တမ်းများအားဖြင့်သက်သေအဖြစ်လွတ်လပ်စွာလက်ခံရရှိသူကတီထွင်ခဲ့; နှင့်
(အီး) လက်ခံသူတစ်ဦးတစ်ဦးဝင်းတရားဝင်အမိန့်များသို့မဟုတ်အခြားအစိုးရမဟုတ်သောခန္ဓာကိုယ်ကိုအညီထုတ်ဖော်ရန်လိုအပ်ပါသည်; ထောက်ပံ့, သို့သော်, စာလက်ခံသူကပထမဦးဆုံးထုတ်ပြန်အသိပေးခြင်းပါတီမှအကြောင်းကြားစာပေးပြီရကြလိမ့်မည်နှင့်ထုတ်ပြန်အသိပေးခြင်းပါတီတစ်ခုကန့်ကွက် interpose ဖို့ကျိုးကြောင်းဆီလျော်အခွင့်အလမ်းပေးဒါမှမဟုတ်လျှို့ဝှက်သတင်းအချက်အလက်ဒါသာအမိန့်ထုတ်ပေးခဲ့သည့်အတွက်အရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အသုံးပြုရမည်ထုတ်ဖော်ကြောင်းလိုအပ်သောအကာအကွယ်အမိန့်ရယူရကြလိမ့်မည်. ဤအပိုင်းကို၏ရပ်စဲ4ဒီသဘောတူညီချက်များ၏ရပ်စဲရှင်သန်ရကြလိမ့်မည်.
အဆိုပါအဖွဲ့ဝင် GlobaliGaming အပေါင်းအဖေါ်များဝယ်ယူခြင်းသို့မဟုတ်ကုန်သည်ရဲ့ဆိုဒ်များမှတဆင့်သို့မဟုတ်ယင်း၏ဆော့ဖ်ဝဲကိုတဆင့်ကုန်သည်ကကမ်းလှမ်းမည်သည့်ဝန်ဆောင်မှုများကို၏အသုံးပြုမှုကိုထောက်ခံသို့မဟုတ်ထောက်ခံပါဘူးကြောင်းဝန်ခံ, မဟုတ်ကအရည်အသွေးအာမခံချက်ပါဘူး, အသုံးပြုနိုင်မှု, မည်သည့်ဥပဒေသို့မဟုတ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့်အတူမည်သည့်ထိုကဲ့သို့ဝန်ဆောင်မှုသို့မဟုတ်လိုက်နာမှုဒါမှမဟုတ်ရလဒ်တွေကို. အဆိုပါကုန်သည်ကကိုယ်စားပြုပြီးရမ်း:
(တစ်ဦး) အဆိုပါကုန်သည်ကဒီသဘောတူညီချက်ထဲသို့ဝင်ရန်နှင့်ဤနေရာတွင်ခွင့်ပြုအခွင့်အရေးနှင့်လိုင်စင်ပေးရန်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်; နှင့်
(ခ) အဆိုပါကုန်သည်၏ဆော့ဖ်ဝဲ, နှင့်မျိုးပွား, ဖြန့်ဖြူး, ဂီယာ, အများပြည်သူစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အဖွဲ့ဝင်ဆိုက်နှင့်ဆက်သွယ်မှုအတွက်ကုန်သည်ရဲ့ပစ္စည်း၏အများပြည်သူ display ကို, မလုပ်ပါနှင့်:
(ကိုယ့်) privacy ကိုသို့မဟုတ်မည်သည့်တတိယပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏လူသိရှင်ကြား၏ညာဘက်ကျူးကျော်; သို့မဟုတ်
(ii) မည်သည့်သရေဖျက်မှုမဆံ့, ညစ်ညမ်းသော, မစင်ကြယ်သောသို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်ဥပဒေမဲ့ပစ္စည်းကို.
ခ. ထိုအဖွဲ့ဝင် site ကိုမ, နှင့်မျိုးပွား, ဖြန့်ဖြူး, ဂီယာ, အများပြည်သူစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ဤနေရာတွင်ခွင့်ပြုသကဲ့သို့အဖွဲ့ဝင်ပစ္စည်းများ၏အများပြည်သူ display ကို, မလုပ်ပါနှင့်:
(ကိုယ့်) privacy ကိုသို့မဟုတ်မည်သည့်တတိယပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏လူသိရှင်ကြား၏ညာဘက်ကျူးကျော်,
(ii) မည်သည့်သရေဖျက်မှုမဆံ့, ညစ်ညမ်းသော, မစင်ကြယ်သောသို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်ဥပဒေမဲ့ပစ္စည်းကို, သို့မဟုတ်
(iii) မည်သည့်မူပိုင်ခွင့်နှင့်ငြိစွန်း, လက်ျာဘက်ဆိုတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အတွက်မူပိုင်ခွင့်သို့မဟုတ်အမှတ်တံဆိပ်; နှင့်
c ကို. ထိုအဖွဲ့ဝင်ထိုကဲ့သို့သောကျူးကျော်မရှိအသိပေးစာလက်ခံရရှိခဲ့သည်, လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်သို့မဟုတ်ချိုးဖောက်မှု
ဒီသဘောတူညီချက်များ၏သက်တမ်းသင်တစ်ဦးနဖူးစည်းစာတန်းကို download လုပ်သောအခါအစတင်ဖို့နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ဒါမှမဟုတ်ကုန်သည်ရဲ့ဆိုက်ကိုဖို့ကလင့်ထားသည်လိမ့်မည်(s ကို) ပါတီတစ်ခုခုကသဘောတူညီချက်ရပ်ဆိုင်းရန်ဆန္ဒရှိသော်လည်းကြောင်းအရေးအသားအတွက်အခြားအကြောင်းအသိပေးချက်မဟုတ်လျှင်နှင့်မှီတိုငျအောငျစဉ်ဆက်မပြတ်ဖွစျလိမျ့မညျ, ဒီသဘောတူညီချက်ချက်ချင်းရပ်စဲစေခြင်းငှါအရာအမှု၌. Terminator အလိုတော်ကို AT IS, အကြောင်းတစ်ခုခု, ဖြစ်စေပါတီ. ရပ်စဲ၏အကြောင်းကြားစာ၏ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်, e-mail, မှတဆင့်ပေးပို့အသိပေးချက်ကိုတစ်ဦးရေးသားချက်ချင်းပုံစံကိုစဉ်းစားသည်. ရပ်စဲအပေါ်သို့:
* သင်သည်သင်၏ site မှ GlobaliGaming အပေါင်းအဖေါ်များသို့မဟုတ်ကုန်သည်ရဲ့နဖူးစည်းစာတန်း / s ကိုဖယ်ရှားငါတို့နဲ့သူတို့ရန်သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေမဆိုလင့်ခ်ကို disable ရမယ်.
* သငျသညျသူတို့သာကြွေးကျန်လွှဲပြောင်းအခကြေးငွေခွင့်လိမ့်မည်, ရှိလျှင်, ပေါ်တွင်သို့မဟုတ်ကြိုတင်ရပ်စဲ၏နေ့စွဲရန်သင့်အားဖွငျ့ရရှိခဲ့. သငျသညျရပ်စဲ၏နေ့စွဲပြီးနောက်ဖြစ်ပေါ်လွှဲပြောင်းအခကြေးငွေခွင့်မည်မဟုတ်ပါ.
* သင်သည်သင်၏တာဝန်ဝတ္တရားများနှင့်တာဝန်များဖြည့်ဆည်းရန်ပျက်ကွက်လျှင်, ကျနော်တို့လွှဲပြောင်းအခကြေးငွေမဟုတ်ရင်ရပ်စဲပေါ်တွင်သင်ရှိနေသော်ငြားလည်းသင်ပေးဆောင်မည်မဟုတ်.
* ကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားမှုကိုခွင့်ပြုမှဆက်လက် အကယ်. (ဝင်ငွေမျိုးဆက်) ရပ်စဲပြီးနောက်ဖောက်သည်ထံမှ, ဤသဘောတူညီချက်သို့မဟုတ်ရပ်စဲတစ်ဦးပယ်ဖျက်ပေးခြင်းသည်တစ်ဆက်သို့မဟုတ်သက်တမ်းတိုးဖွဲ့စည်းမည်မဟုတ်.
* သင်သည်မည်သည့်လျှို့ဝှက်သတင်းအချက်အလက်ကျွန်တော်တို့ကိုပြန်လာကြလိမ့်မည်, နှင့်သင့်အပိုင်ထဲမှာရှိသမျှကိုမိတ္တူ, ထိန်းသိမ်းထားနှင့်ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်မဆိုကုန်သွယ်ရေးအမည်များအားလုံးအသုံးပြုမှုငြိမ်းလိမ့်မည်, အမှတ်တံဆိပ်, ဝန်ဆောင်မှုအမှတ်အသားများ, အမှတ်တံဆိပ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်သည်များ၏အခြားပုံစံ.
* သင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ထိုကဲ့သို့သောရပ်စဲ၏နေ့စွဲပြီးနောက်အချင်းချင်းဖြစ်ပေါ်သို့မဟုတ်ပေါ်ပေါက်ဖို့အားလုံးကိုတာဝန်ဝတ္တရားများနှင့် liabilities ကနေလွတ်မြောက်လာပါလိမ့်မည်, သူတို့ရဲ့သဘောသဘာဝအားဖြင့်ရပ်စဲရှင်သန်ဖို့ဒီဇိုင်းသောသူတို့အားတာဝန်ဝတ္တရားမှရိုသေလေးစားမှုနှင့်အတူ မှလွဲ., ဒီသဘောတူညီချက်ထဲကသတ်မှတ်ထားအဖြစ်. ရပ်စဲကြိုတင်ရပ်စဲဖို့ဖြစ်ပွားခဲ့သည်သောဤသဘောတူညီချက်မဆိုချိုးဖောက်နေဖြစ်ပေါ်လာမဆိုတာဝန်ယူမှုထံမှသင်တို့သက်သာရာမည်မဟုတ်
WE ဆုံးဖြတ်ရန်မယျဆိုရငျဒီနည်းကိုသဘောတူညီချက်ရပ်ဆိုင်းနိုင်သည် (ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝါးဉာဏျ) သင့် SITE ကိုမသင့်တော်ကြောင်းကို.
အပေါင်းအဖေါ်များ GlobaliGaming program ကိုတစ်ခု Affiliate ရဲ့ပါဝင်မှုကိုပယ်ဖျက်ဖို့ရှေးခယျြစေခြင်းငှါ, ၎င်း၏အကြွင်းမဲ့အာဏာသမ္မာသတိမှာ, အ Affiliate ဒီစာချုပ်၏ပြိုပျက်ရာတွင်သို့မဟုတ်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်သလိုအ Affiliate စည်းကမ်းချက်များသို့မဟုတ်ထို program ၏ရည်ရွယ်ချက်မှဤသို့သောထုံးစံဆန့်ကျင်အတွက်ပြုမူကြယုံကြည်သည်ဆိုပါကပါလျှင်. ထိုတွဲဖက်အ Affiliate ကွန်ယက်၏အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်တာတွေရပ်စဲလိုလျှင်, အပေါင်းအဖေါ်များ GlobaliGaming ဒီသဘောတူညီချက်ရပ်ဆိုင်းရန်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်.
မသင့်တော်ဆိုဒ်များသောသူတို့ကိုပါဝင်စေခြင်းငှါ: ကလေးများမှာရည်ရွယ်နေကြပါတယ်, လိင်ကအကဲဆတ်သောပစ္စည်းများမြှင့်တင်ရန်, အကြမ်းဖက်မှုများမြှင့်တင်ရန်, မျိုးနွယ်အပေါ်အခြေခံပြီးခွဲခြားဆက်ဆံမှုမြှင့်တင်ရန်, လိင်, ဘာသာ, အမျိုးသား, မသန်စွမ်းမှု, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်, သို့မဟုတ်အသက်အရွယ်, တရားမဝင်လှုပ်ရှားမှုများမြှင့်တင်ရန်, သို့မဟုတ်ပညာတတ်ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးများကိုချိုးဖောက်.
သံသယများရှောင်ရှားခြင်းအဘို့အ, သဘောတူညီချက်၏ရပ်စဲသဘောတူညီချက်များ၏ရပ်စဲ post generated ပိုက်ကွန်ကိုဂိမ်းကစားဝင်ငွေအနေဖြင့်အဖွဲ့ဝင်များကရရှိခဲ့ပြီးဖြစ်စေခြင်းငှါမဆိုကော်မရှင်ငွေပေးချေမှုငြိမ်းလိမ့်မည်.
မတည်မပါတီသည်အခြားပါတီမှထိုက်ဖြစ်လိမ့်မည် (မျှမလူတစ်ဦးမှအခြားပါတီရဲ့အခွင့်အရေးများမှဆင်းသက်လာလူ့အခွင့်အရေးဟုဆိုကာ) ဖွစျပှားများအတွက်, သွယ်ဝိုက်, လက်ငင်းအကျိုးသက်ရောက်မှု, အထူး, မည်သည့်မျိုးပြစ်ဒဏ်ခတ်သို့မဟုတ်စံပြပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု - ပျောက်ဆုံးဝင်ငွေသို့မဟုတ်အမြတ်အစွန်းအပါအဝင်, စီးပွားရေးဆုံးရှုံးမှု, အချက်အလက်များ၏သို့မဟုတ်ဆုံးရှုံးမှု - ဤသဘောတူညီချက်ထဲကပေါ်ထွက်လာသော (ဒီသဘောတူညီချက်မဆိုအာမခံသို့မဟုတ်အခြားသက်တမ်းမဆိုချိုးဖောက်၏ရလဒ်အဖြစ်န့်အသတ်မရှိဘဲအပါအဝင်), မခွဲခြားဘဲပါတီထိုက်သို့မဟုတ်စွပ်စွဲချက်တွေနဲ့ထိုက်အကြံပေးခဲ့သည်ဖြစ်စေ၏, သိရန်အခြားအကြောင်းပြချက်ခဲ့, သို့မဟုတ်တကယ်တော့တို့ကိုဖြစ်နိုင်ခြေသိ.
အဖြစ်ဖော်ပြဤနေရာတွင်ထောက်ပံ့ မှလွဲ., သူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာဝက်ဘ်ဆိုက်များမျှော်လင့်ထားထုံးစံ၌ဖြစ်စေပြတ်တောက်ခြင်းမရှိဘဲလုပ်ဆောင်လိမ့်မည်ဟုလည်းမပါတီရမ်း, အမှား, သို့မဟုတ်အပြစ်အနာအဆာ, ဒါမှမဟုတ်ပါတီမဆိုဝင်ငွေကဒီသဘောတူညီချက်အားဖြင့်စဉ်းစားလှုပ်ရှားမှုများကိုကနေရလဒ်လိမ့်မည်ဟု. အဖြစ်ဖော်ပြဒီသဘောတူညီချက်ထဲမှာထွက်သတ်မှတ်ထား မှလွဲ., မဟုတ်ပါတီမဆိုမျိုးကိုမဆိုအာမခံစေသည်, ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသို့မဟုတ်ဆိုလို, အထူးသဖြင့်စာရင်းကောက်ယူမဉာဏပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုဆန့်ကျင်နေတဲ့အထူးသဖြင့်ရည်ရွယ်ချက်သို့မဟုတ်အာမခံများအတွက်ကုန်သွယ်မှုသို့မဟုတ်ကြံ့ခိုင်ရေး၏အာမခံအပါအဝင်.
မဟုတ်ရင်ဤနေရာတွင်ထောက်ပံ့ပေးအဖြစ် မှလွဲ., GlobaliGaming အပေါင်းအဖေါ်များမအဖွဲ့ဝင်မဟုတ်ဒီသဘောတူညီချက်သို့မဟုတ်ယင်း၏အခွင့်အရေးဆို assign သို့မဟုတ်ဤသဘောတူညီချက်အောက်မှာက၎င်း၏တာဝန်မဆိုလွှဲအပ်ခြင်းငှါ, အခြားတစ်၏ကြိုတင်ရေးသားထားသောသဘောတူညီချက်မပါဘဲ. ထိုကဲ့သို့သောလိုအပ်တဲ့ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲမဆိုမူရင်းတာဝန်ကိုသို့မဟုတ်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ပျက်ပြယ်ဖြစ်ရကြလိမ့်မည်.
ဒီသဘောတူညီချက်, သူ့ရဲ့အနက်, စွမ်းဆောင်ရည်သို့မဟုတ် သိ. ဆိုပြိုပျက်ရာ, နှင့်အညီဖြစ်ပေါ်စေမည့်မည်ရကြလိမ့်မည်, နှင့်ရိုသေလေးစားမှုရမညျနှင့်အတူအားလုံးမေးခွန်းများကိုကဆုံးဖြတ်ခံရကြလိမ့်မည်, ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း၏ပြည်တွင်းရေးထိရောက်သောဥပဒေများ.
အဆိုပါအဖွဲ့ဝင်တို့သည်ကုန်သည်ရဲ့ဆိုက်ကိုအတူတစ်ခုတည်းအဖွဲ့ဝင်ဆိုက်လုပ်ကိုင်ရန်သဘောတူ(s ကို). GlobaliGaming အပေါင်းအဖေါ်များရှာဖွေတွေ့ရှိသင့်တယ်လိုလျှင်, သတင်းအချက်အလက်ကို အသုံးပြု. ကြောင့်အခြေအနေများတွင်သင့်လျော်ယူဆ, ထိုအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးထက်ပိုအဖွဲ့ဝင်အကောင့် operating ကြောင်း, ဒီသဘောတူညီချက်ရပ်ဆိုင်းရကြလိမ့်မည်နှင့်အဖွဲ့ဝင်ကော်မရှင်နှင့်လွှဲပြောင်းဆုကြေးငွေအားလုံးကိုအခွင့်အရေးများလက်လွှတ်ဆုံးရှုံးလိမ့်မည်. အများအပြားဆိုဒ်များတအကောင့်မှတ်ပုံတင်ထားစေခြင်းငှါ; သို့သော်, အသစ်တစ်ခု site ပေါ်တွင်မည်သည့် site ကိုနဖူးစည်းစာတမ်း၏နေရာချထား, အ GlobaliGaming အပေါင်းအဖေါ်များအဖွဲ့ဝင်များအစီအစဉ်အောက်မှာ, ထိုအဖွဲ့ဝင်များကဖော်ပြခဲ့သည်နှင့်ရှေ့မအ GlobaliGaming အပေါင်းအဖေါ်များ Support Team သို့အားဖြင့်ရှင်းလင်းခြင်းကိုခံရလုပ်ရမှာ, ဒါလုပ်ဖို့ပျက်ကွက်သည့်အဖွဲ့ဝင်ရဲ့အကောင့်များ၏ရပ်စဲဖြစ်ပေါ်စေမည်. အဆိုပါအဖွဲ့ဝင်လည်းကော်မရှင်နှင့်လွှဲပြောင်းဆုကြေးငွေအားလုံးကိုအခွင့်အရေးများလက်လွှတ်ဆုံးရှုံးလိမ့်မည်.
မိတ်ဖက်များနှင့်အဖွဲ့ဝင် GlobaliGaming ဒီသဘောတူညီချက်အောက်မှာလွတ်လပ်သောကန်ထရိုက်တာများမှာ, အလျှင်းမဤနေရာတွင်တစ်ဦးပူးပေါင်းဖန်တီးရန်ဖြစ်ပေါ်စေမည့်မည်ရကြလိမ့်မည်, ဖက်စပ်, GlobaliGaming အပေါင်းအဖေါ်များနှင့်အဖွဲ့ဝင်များအကြားသို့မဟုတ်အေဂျင်စီကြားဆက်ဆံရေး. မတည်မပါတီသည်အခြားပါတီကိုယ်စားမည်သည့်မျိုးသဘောတူညီချက်များသို့ဝငျဖို့အခွင့်အာဏာရှိပါတယ်.
ဒါဟာသူတို့ရဲ့အဖွဲ့ဝင်ရဲ့အမြတ်အစွန်းကနေအခွန်ကိုကြေညာဖို့အဖွဲ့ဝင်ရဲ့တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်, သူတို့တိုင်းပြည်ရဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ. ဒါဟာသူ့ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေဆပ်ဖို့ကုန်သည်ရဲ့တာဝန်ဖြစ်ပါတယ် GlobaliGaming အပေါင်းအဖေါ်များက၎င်း၏အဖွဲ့ဝင်များ၏ငွေပေးချေမှုပတ်သတ်ပြီးအတွက်၎င်း၏ကုန်သည်များ၏လုပ်ဆောင်ချက်များအတွက်တာဝန်ယူကျင်းပမည်မဟုတ်ပါ.
အပေါင်းအဖေါ်များလည်း cookies တွေကိုအကုန်သည်များ site ပေါ်တွင်သို့မဟုတ်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးရဲ့ site ပေါ်တွင်ခြေရာခံနေသောလမ်းများအတွက်တာဝန်မ GlobaliGaming. ကွတ်ကီး / ခြေရာခံခြင်း code တွေရဲ့ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအကုန်သည်၏တာဝန်ဖြစ်ပါသည်. အပေါင်းအဖေါ်များ GlobaliGaming တင်းကြပ်စွာသူ့ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေများအတွက်ခြေရာခံ၏ရလဒ်များကိုဖော်ပြပေးတဲ့အိမ်ရာဆော့ဝဲဖြစ်ပါသည်
ဒီသဘောတူညီချက်မဆိုပြဋ္ဌာန်းချက်ကိုမဆိုချိုးဖောက်၏အဘယ်သူမျှမစွန့်လွှတ်မဆိုကြိုတင်တစ်ဦးပယ်ဖျက်ပေးခြင်းသည်ဖွဲ့စည်းရကြလိမ့်မည်, အလားတူ၏တစ်ပြိုင်တည်းပါသို့မဟုတ်နောက်ဆက်တွဲဖောက်ဖျက်သို့မဟုတ် hereof အခြားမည်သည့်ပြဋ္ဌာန်းချက်များ, စာအရေးအသားအတွက်လုပ်နှင့် waiving ပါတီတစ်ခုအခွင့်အာဏာကိုယ်စားလှယ်ကလက်မှတ်ရေးထိုးမဟုတ်လျှင်နှင့်မျှမပယ်ဖျက်ပေးခြင်းသည်ထိရောက်သောဖြစ်ရကြလိမ့်မည်.
အပေါင်းအဖေါ်များ GlobaliGaming အသုံးပြုမှုမှာပြုပြင်ထားသောစည်းကမ်းချက်များကိုတင်လိုက်ခြင်းဖြင့်ဤသဘောတူညီအတွက်ထွက်သတ်မှတ်စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များမဆိုပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းငှါ: http://partners.globaligaming.com သို့မဟုတ်ပါကရွေးကောက်ပြီးအခြားဆိုက်မှာ, နဲ့အီးမေးလ်အသိပေးစာမှတဆင့်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း၏အဖွဲ့ဝင်ကိုအသိပေးခြင်းအားဖြင့်. ပြုပြင်မွမ်းမံပါဝင်နိုင်, ဥပမာ, ရရှိနိုင်လွှဲပြောင်းအခကြေးငွေ၏အတိုင်းအတာပြောင်းလဲမှုများ, အခကြေးငွေအချိန်ဇယား, ငွေပေးချေမှုလုပျထုံးလုပျနညျး, ကော်မရှင်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ, ငွေပေးချေမှုခုံနှင့်လွှဲပြောင်းအစီအစဉ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို. မဆိုပြုပြင်မွမ်းမံသငျဖို့လက်မခံနိုင် IS IF, သင့်တစ်ခုတည်းသောကုစားရေးဒီနည်းကိုသဘောတူညီချက်ရပ်ဆိုင်း IS. ပြောင်းလဲခြင်းအသိပေးချက်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏ site ပေါ်တွင်သဘောတူညီချက်အသစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ post နောက်လိုက်ခြင်းအစီအစဉ်တွင်သင့်ဆက်လက်ပါဝင်မှုပြောင်းလဲမှုတွေကိုခညျြနှောငျလက်ခံသည်ဟုသတ်မှတ်မည်.